Global Voices teny Malagasy » Ahoana ny fomba hanairan’ny anganom-bahoaka voatahiry ny ikajiana ny tontolo iainana ao Mekong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Janoary 2019 14:46 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Laos, Thailandy, Fanoherana, Fiteny, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Teratany, Tontolo_iainana, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina, Rising Voices
Tamin'ny taona 2014, fokonolona tompotany maro ao Mekong no nanomboka nandrakitra  ny tantarany sy ny anganony nampian'ny vondrona mpikaroka izay mandalina ny fomba anehoan'ireo fomba fitantara ireo ny fanimbàna goavana aterak'ireo tetikasa lehibe ao amin'ny faritra.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, tetikasa goavana maro toy ny tohodrano  hakana herinaratra no namindrana mponina maro ary mandrahona ny tontolo voarin'ny fivarinandranon'ny renirano. Na dia nisy aza ny fihetsiketseham-panoherana, mbola nitohy ihany ny fananganana tohodrano, indrindra fa tao Laos sy Thailandy.
Tao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny Mekong Watch, vondrona mpanandra-teny ny fampivoarana lovainjafy ao amin'ny faritra, miorina ao Japan, zokiolona maro avy amin'ny vondrom-piarahamonina isan-karazany ao Mekong no nanomboka nandrakitra ny sasantsasany amin'ireo tantara sy angano tamin'ny taona 2014 izay mamaha-tena avy amin'ny natiora. Mino  ny Mekong Watch fa “nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fiarovana ny natiora tamin'ny alalan'ny fisorohana ny fitrandrahana tafahoatra ireo loharanon-karenany voajanahary” ireny tantara ireny.
Mijoro am-pahasahiana ny Mekong Watch fa raha ao anatin'ny zavatra iraisana ilaina arovana ny loharanonkarena voajanahary dia eo ihany koa ny “vakoka tsy azo tsapain-tanana”  izay azo zaraina sy idiran'ny vondrom-piarahamonina anatiny. Nanampy i Toshiyuki Doi, mpanolotsaina zokiolona ao amin'ny Mekong Watch:
Afa-nanangona tantara miisa 102 ao Kambodza, Laos, ary Thailandy. Noraketina ny tantara, navadika an-tsoratra, ary nadika ho amin'ny tenim-pirenena maro ao Thailandy, Laos, Kambodza mialoha ny nahavitan'ny amin'ny teny anglisy. Namoaka ireo tantara ireo amin'ny endrika bokikely ny Mekong Watch na amin'ny endrika printy izany na amin'ny endrika nomerika, ary nampiasa  azy ireny mandritra ny atrikasan'ny tontolo iainana tarihin-dry zareo ao amin'ny vondrom-piarahamonina.
Ohatra iray amin'ny atrikasa ny famerenana indray ny tantaran’‘Ny Tararaka sy ny Diera’  avy amin'ny vahoaka Kmhmu ao avaratra sy afovoan'i Laos. Ny tantara dia momba ny tararaka (vorondolo) iray tsy afa-mahita mandritra ny andro rehefa avy mamitaka diera iray.
Nanontany  ireo tanora mpandray anjara nandritra ny atrikasa iray : “Karazana biby inona no mipoitra amin'ny tantara?”, “Afa-mahita ireo biby ireo ve ianareo any an-tanànakelinareo?”, ary “Raha vitsy kokoa noho ny teo aloha ireo biby ireo, nahoana ianao no mieritreritra izay nitranga?”
Ao amin'ny faritanin'i Champasak, Laos atsimo, ny anganon'ny feso Irrawaddy  tandindonin-doza sy ny vorona Sida no nampiasaina hanasongadinana ny fahatapahana  nataon'ny tetikasan-tohodrano amin'ny fanjonoana ao amin'ny renirano Mekong.
Ahitan-javatra amin'ny lanja n'ny fitantanana loharanonkarena voajanahary ihany koa ny tantara iray hafa avy ao atsimon'i Laos :
Ao amin'ny faritra avaratr'i Thailandy, tantara iray avy amin'ny vahoaka Akha momba ny fiavian'ny an-tsavily  mampianatra ny fanaovana sorona ny tena amin'ny alalan'ny tantara feno herimpo ataon'ny mpianadahy iray mba hampisy lamina eto amin'izao tontolo izao.
Any avaratra atsinanan'i Thailandy, anganom-bahoaka iray momba an'i Ta Sorn  tantarain'i Tongsin Tanakanya no mampiroborobo ny firaisankina eo amin'ny mpifanolobodirindrina eo amin'ny fiarahamonim-pamboly sy mpiompy. Tantara iray hafa mampahatsiahy fa ny fihazana tokatandroka iray no nahatonga ny fananganana fivarotan-tsira  ao amin'io faritry ny firenena io.
Ao Bunong, miorina ao avaratra atsinanan'i Kambodza, maro ireo tantaram-pombapomba atao hanarenana  fanambadiana tsy milamina sy lanonam-pambolena sy fijinjana  tantarain'i Khoeuk Keosineam. Misy ihany koa ny anganon'ny elefanta  araka ny nitantaran'i Chhot Pich azy indray izay nampiseho fa nosazian'andriamanitra ireo mponina ambanivohitra iray ka navadika ho elefanta. Manazava izany fa afa-miaina miaraka amin'olombelona tsara ny elefanta, saingy aorian'ny fifandimbiasan'ny taranaka dia adinon-dry zareo ny niaviany ka lasa niverina nonina any an'ala indray.
Ho an'ny Mekong Watch sy ireo vondrom-piarahamonina tandindonin-doza ao amin'ny faritra, feno tanteraka ny fikojakojana ireo tantara ireo amin'ny fanentanana hifahatra  manoloana ny tetikasa izay hamindra olona an'arivony miaina amin'i Mekong:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/07/132813/
 “vakoka tsy azo tsapain-tanana”: http://www.mekongcommons.org/commons-are-telling-peoples-folktales-and-legends-on-their-environment/
 ‘Ny Tararaka sy ny Diera’: http://www.mekongwatch.org/peoplestory/zone1-story6.html
 feso Irrawaddy: http://www.mekongwatch.org/peoplestory/zone2-story2.html
 Ta Sorn: http://www.mekongwatch.org/peoplestory/zone4-story5.html